'Marvel's' Shang-Chi 'Trailer wuxuu halkan u joogaa inuu kaa Dhigo Wajiga - iHorror
Bogga ugu weyn Warar Naxdin Leh Trailer-ka 'Marvel' 'Shang-Chi' wuxuu halkan u joogaa inuu kugu rido wajiga
Warar Naxdin LehTrailer (filim)
Trailer-ka 'Marvel' 'Shang-Chi' wuxuu halkan u joogaa inuu kugu rido wajiga
Guys. Guys! Niman yahow! The Shang-Chi trailer waa halkan maskaxdeenana si rasmi ah ayaa loo afuufay. Muuqaalka waallida xun ee xun Shang-Chi iyo Legend of Tobanka Rings ayaa soo dejisay xamuul aad u fara badan oo ah alaab yaab leh oo mustaqbalka ah oo la filayo.
Gelitaankii ugu dambeeyay ee Marvel waa midka ugu geesinimada iyo bannaanka sanduuqa tan iyo Ilaaliyaha Galaxy. Iyo sida oo kale Masuuliinta waxay ahayd galitaan weyn oo lama filaan ah midkani wuxuu umuuqdaa inuu jiidayo isla qaddarka sixirka kung-fu.
Shang-Chi wuxuu ka kooban yahay wajiga afaraad ee filimada Marvel Waxay na baraysaa ficil la yaab leh laakiin ugu muhiimsan waxay soo bandhigeysaa adduunyo ku xirmi doona kuwa adduunka Steven Strange. Marxaladani waa gacmaha hoos ugu ugu xiisaha badan ee weli. Waxay sidoo kale u muuqataa inay qaadaneyso fursadaha ugu badan ee ku jira nuxurka waallida ah. Waxaan ula jeedaa, kung-fu ee Marvel waxay noqon doontaa wax xun, hubaal. Laakiin, horay looma sameyn. Waa inaad u jeclaataa Marvel kan.
Maxaad u maleyneysaan ragga ku saabsan trailer-kii ugu dambeeyay Shang-Chi iyo Halyeeygii Tobanka Rigood? Noo soo sheeg qaybta faallooyinka.
Muuqaalka Filimka ee Jacaylka, Dhimashada + Robot-ka Volume 2 wuxuu u muuqdaa mid gebi ahaanba maskaxda ka dhacaya. Halkan ka eeg.
Trey wuxuu ku koray isugeynta inta udhaxeysa dariiqa dukaanka fiidiyowga. Ka dib markii taxane loo waxyooday Cronenbergian, Wuxuu si rasmi ah ugu dhex milmay labada filim iyo cayaaro fiidiyoow ah. Wuxuu qorayaa wax walboo dhaqanka pop, wuxuuna si kadis ah u laaday labo shark oo wuu noolaa. Isaga sii raac oo ku dhaji wax aan aad u xukumin @TreyHilburn.
Filim cusub oo Doc ah oo loo daadinayo 'Snapper' Filim Qoolley ah oo 'Kiltle' aanad weligaa arkin
Trailer 'Deep Blood' Trailer wuxuu ku siinayaa daamanka daamanka oo ka duwan wax kastoo aad qiyaastay ee suurtogalka ah